Anandamide VS CBD: Kedu nke dị mma maka ahụike gị?
Mbido > Anandamide VS CBD: Kedu nke dị mma maka ahụike gị? Ihe niile I Kwesịrị Knowmara Banyere Ha!
Gịnị bụ Anandamide (AEA)
Anandamide (AEA), a makwaara dị ka bliss molecule, ma ọ bụ N-arachidonoylethanolamine (AEA), bụ fatty acid neurotransmitter. Aha Anadamida (AEA) sitere na Sanskrit nke Joy "Ananda." Raphael Mechoulam chepụtara okwu ahụ. Kedu, ya na ndị enyemaka ya abụọ, WA Devane na Lumír Hanuš, buru ụzọ chọpụta “Anandamide” n’afọ 1992. Anandamide (AEA) bụ nnukwu ndozi maka ọtụtụ nsogbu anụ ahụ na nke uche anyị.
Gịnị bụ Cannabidiol (CBD)?
Cannabidiol (CBD) bụ ogige nke abụọ na-arụsi ọrụ ike nke a maara dị ka cannabinoids dị na mkpụrụ osisi sativa (wii wii ma ọ bụ hemp). Tetrahydrocannabinol (THC) bụ nke juru ebe niile yana kwa psychoactive cannabinoid dị na osisi cannabis. THC jikọtara ya na ịnweta mmetụta "elu".
Agbanyeghị, CBD anaghị emetụta mmụọ ma sitere na osisi hemp nke nwere obere THC. Ihe onwunwe a emeela ka CBD bụrụ onye a ma ama na ngalaba ahụike na ahụike.
Cannabidiol (CBD) n'aka nke ọzọ sitere na osisi cannabis site na ịgbakwunye CBD amịpụtara na mmanụ ụgbọelu dịka mmanụ mkpụrụ hemp ma ọ bụ mmanụ aki oyibo.
Anandamide & Cannabidiol Ajụjụ
Gịnị bụ Anandamide?
Anandamide, nke a makwaara dị ka N-arachidonoylethanolamine, bụ ụbụrụ na-eme ka abụba na-enweta site na nke na-abụghị nke oxidative metabolism nke eicosatetraenoic acid, ihe dị mkpa omega-6 fatty acid. Aha a sitere na okwu Sanskrit ananda, nke putara "obi uto, obi uto, obi uto", na amide.
Anandamide bụ hormone?
Nnyocha ahụ na-enye njikọ mbụ n'etiti oxytocin - nke akpọrọ "ịhụnanya ịhụnanya" - na anandamide, nke a na-akpọ "bliss molecule" maka ọrụ ya na-arụ ọrụ ndị na-anabata cannabinoid na sel ụbụrụ iji bulie mkpali na obi ụtọ.
Anandamide ọ na-akpali ma ọ bụ na-egbochi ya?
Na mmechi, ndị na-anabata cannabinoid nke ụdị CB1 yana ha ligandous ligand, anandamide, na-etinye aka na njikwa nke mkparịta ụka neuronal, si otú a na-ebelata ntanetụ na-ebugharị na saịtị presynaptic, usoro nke nwere ike itinye aka na mgbochi oke excitability na-eduga na .
Kedu ihe bụ endocannabinoids abụọ kachasị mee nchọpụta nke ahụ na-emepụta?
Ndị nchọpụta na-eche na enwere ike ịnwe ihe nnabata nke atọ Cannabinoid na-echere ka a chọpụta ya. Endocannabinoids bụ ihe ahụ anyị na-eme iji kpalie ndị nnabata a. A na-akpọ ihe abụọ a ghọtara nke ọma banyere mkpụrụ ndụ ndị a anandamide na 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Ahụ mmadụ ọ nwere usoro cannabinoid?
Usoro Cannabinoid dị egwu-akpọrọ aha maka osisi ahụ nke dugara na ya-bụ otu n'ime usoro physiologic kachasị mkpa gụnyere ịhazi na ịnọgide na-enwe ahụ ike mmadụ. A na - ahụ endocannabinoids na ndị natara ha n’ime ahụ niile: na ụbụrụ, akụkụ ahụ, ihe njikọ njikọta, glands na sel ndị na - alụso ọrịa ọgụ.
Kedu ihe mbụ cannabinoid chọpụtara?
Na 1992, ụlọ nyocha Mechoulam kewapụrụ nke mbụ endocannabinoid: molekul nke emechara nkewa dị ka onye na-anabata agonist CB1. Achọpụtara ya dị ka arachidonoyl ethanolamide ma kpọọ ya anandamide.
Anandamide ọ bụ chocolate?
Otú ọ dị, THC ahụghị na chocolate. Kama, chemical ọzọ, neurotransmitter a na-akpọ anandamide, dịpụrụ iche na chocolate. N'ụzọ na-akpali mmasị, a na-emepụta anandamide n'ụzọ nkịtị na ụbụrụ.
Ọ bụ chocolate a cannabinoid?
A na-akpọ Anandamide endocannabinoid n'ihi na ọ na-eme ya site na ahụ anyị ma na-eicsomi cannabinoids dị na osisi wii wii. Yabụ, ihe dị na chọkọletị na akụrụngwa na wii wii nwere ike ịkpalite ụbụrụ ụbụrụ wii wii nke ụbụrụ anyị.
Ndi chocolate nwere theobromine?
Theobromine bụ isi alkaloid dị na koko na chocolate. Cocoa ntụ ntụ nwere ike ịdị iche na ego nke theobromine, site na 2% theobromine, ruo n'ọkwa dị elu gburugburu 10%. A na-enwekarị ịkarị elu n'ọchịchịrị karịa na nke dị na chocolate chocolate.
Kedu ihe bụ cannabinoids kachasị?
Abụọ ndị isi cannabinoids bụ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) na cannabidiol (CBD). Ndị a kacha mara amara na ha abụọ bụ delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), nke bụ kemịkalụ nke na-ahụ maka mmetụta uche nke cannabis.
Kedu ihe bụ bliss molecule?
Anandamide bụ ụbụrụ ụbụrụ amachaghị nke akpọrọ “bliss molecule” maka ọrụ ọ na - arụ n’inwe mmetụta nke anụrị. … Ọ na-arụ ọrụ site na ijikọta otu ndị natara na ụbụrụ dịka isi ihe na-emetụta akparamàgwà mmadụ na wii wii.
Anandamide ọ bụ ọgwụ?
Anandamide, ligandị dị egwu maka ụbụrụ Cannabinoid ndị nabatara CB1, na-ewepụta ọtụtụ akparamagwa yiri nke Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), isi ihe na-emetụta akparamàgwà mmadụ na wii wii.
Ahụ mmadụ ọ na-emepụta cannabinoids?
Endocannabinoids. Endocannabinoids, nke a na-akpọkwa cannabinoids dị egwu, bụ mkpụrụ ndụ nke ahụ gị. Ha yiri cannabinoids, mana ha na-emepụta ya.
Ndi CBD na-abawanye dopamine?
CBD na-emekwa ka onye nnabata adenosine na-agba ume ịhapụ ntọhapụ nke glutamate na dopamine neurotransmitters. Site na mmekorita ya na ndi nabatara dopamine, o na - enyere aka iwulite ogo dopamine ma dozie cognition, nkwali, na omume ichota ugwo.
Ndi Indica na-abawanye dopamine?
na-ebelata nnukwu mgbu. enwekwu agụụ. enwekwu dopamine (a ọgụgụ akwara mbufe ozi na-enyere aka ịchịkwa ụbụrụ ụgwọ ọrụ na obi ụtọ emmepe) n'ihi na abalị oge iji.
Kedu ụdị ọgwụ chocolate?
Na mgbakwunye na shuga, chọkọletị nwekwara ọgwụ abụọ anaghị arụ ọrụ, caffeine na theobromine. Ọ bụghị nanị na chocolate na-akpali ndị opiate ndị natara na ụbụrụ anyị, ọ na-emekwa ka a tọhapụ neurochemicals na ebe obi ụtọ ụbụrụ.
Kedu ihe anandamide na-eme n'ahụ?
Ahụ anyị na-emepụta anandamide na-achọ, iji mee ihe mgbe ọ dị mkpa iji dozie homeostasis. Anandamide na-eme nke a site na inye aka ịchịkwa mbufụt na sigịnalụ neuron. Dị ka e kere ya, ọ na-ejikọtara anyị na ndị na-anabata cannabinoid CB1 na CB2 dị ka a cannabinoids dị ka THC ga-eri.
Kedu ihe bụ Cannabinoid usoro nnabata?
Cannabinoid ndị natara, nke dị n'akụkụ ahụ dum, bụ akụkụ nke usoro endocannabinoid, nke na-etinye aka na usoro usoro ahụike dị iche iche gụnyere agụụ, mmetụ mgbu, ọnọdụ, na ebe nchekwa. Cannabinoid ndị nabatara bụ ndị otu n'ime ndị na - anabata mkpụrụ ndụ sel na G na - na - enweta nnabata na protein.
Kedu ihe ndị otu ọrụ dị iche iche dị na anandamide?
Ndị otu na-arụ ọrụ Anandamide gụnyere amides, esters, na ethers nke polyunsaturated fatty acids, na ịkekọrịta kesara pharmacophores dị egwu na D-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Kedu ka ị si abawanye ogo anandamide n'ụzọ nkịtị?
Rie nri bara ụba na mkpụrụ osisi ndị a wee gbochie mmepụta FAAH gị nke na - eme ka anandamide gị dị elu! Chocolate bụ nri ọzọ nwere ike inye aka bulie anandamide. O nwere onyinye amara dika ethylenediamine nke na egbochi FAAH imeputa. Buru ihe oriri atọ a n'uche oge ọzọ ị ga-abanye n'ime nnukwu ụlọ ahịa.
Chocolate nwere anandamide?
Ọ bụ ọgwụ ọgwụ ike?
Chocolate nwere nnukwu shuga. Na mgbakwunye na shuga, chọkọletị nwekwara ọgwụ abụọ anaghị arụ ọrụ, caffeine na theobromine. Ọ bụghị nanị na chọkọletị na-akpali ndị opiate na-anabata ụbụrụ anyị, ọ na-emekwa ka a tọhapụ neurochemicals na ebe obi ụtọ ụbụrụ.
Kedu ọgwụ dị na chocolate?
Theobromine bụ isi alkaloid dị na koko na chocolate.
Kedu kemịkalụ dị na chocolate?
Theobromine, nke a na-akpọbu xantheose, bụ alkaloid dị ilu nke osisi cacao, yana usoro ọgwụ C7H8N4O2. A na - ahụ ya na chocolate, yana n'ọtụtụ nri ndị ọzọ, gụnyere epupụta nke osisi tii, na kola nut.
Chocolate ọ na-abawanye serotonin?
Agbanyeghị, n'ihi na chocolate nwere tryptophan, mmụba nke serotonin nwere ike inye aka kọwaa ihe kpatara mmadụ ga-eji nwee obi anụrị, obi iru ala, ma ọ bụ obere nchekasị mgbe ọ risịrị otu achịcha chọkọleti ha (Serotonin).
Kedu ihe anandamide nwere?
Anandamide na-ekere òkè na iwu nke usoro nri, na usoro nhụsianya na obi ụtọ. Anandamide gbanye ozugbo n'ime ụbụrụ ụbụrụ metụtara ụgwọ ọrụ ụbụrụ na-eme ka mmeghachi omume nke oke dị ụtọ na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ, na-emekwa ka nri rie nri.
CBD ọ bụ antioxidant?
THC na CBD bụ antioxidants dị ike-dị ike karịa vitamin C na E. N'ezie, US Government Patent 1999/008769 bụ maka maka ọrụ neuroprotectant na antioxidant nke cannabinoids.
Kedu ihe enzyme FAAH na-eme?
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) bu enzyme nke anakpo mammalian bu nke na emebi emebi ulo abuba fatty acid amide nke nkpuru obi ojoo, nke gunyere ihe ndi ozo cannabinoid anandamide na ihe ndi mmadu na-ehi ura oleamide.
Kedu ka CBD si emetụta anandamide?
Ihe omumu nke ihe omumu na egosi na cannabidiol nwere ike ime ka ihe ngosi anandamide di egwu, site na igbochi nbibi intracellular nke anandamide nke enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) kpalitere.
Kedu ihe cannabinoid pụtara?
Okwu cannabinoid na-ezo aka na ihe ọ bụla mmiri ọgwụ, n'agbanyeghị agbanye ma ọ bụ mmalite, nke na-esonyere ndị na-anabata Cannabinoid nke ahụ na ụbụrụ ma nwee mmetụta yiri nke ndị na-emepụta Cannabis Sativa osisi. Cannab Isi cannabinoids abuo bu delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) na cannabidiol (CBD).
Kedu ihe bụ endocannabinoid system na gịnị ka ọ na-eme?
Ahụ mmadụ nwere usoro pụrụ iche a na-akpọ endocannabinoid system (ECS), nke metụtara ịhazi ọrụ dịgasị iche iche gụnyere ụra, agụụ, mgbu na usoro mmeghachi ahụ.
Ahụ mmadụ ọ nwere ndị na-anabata cannabinoid?
Cannabinoid ndị natara, nke dị n'akụkụ ahụ dum, bụ akụkụ nke usoro endocannabinoid, nke na-etinye aka na usoro usoro ọgwụgwọ dị iche iche gụnyere agụụ, ihe mgbu, ọnọdụ na ncheta. N'afọ 2007, ejikọtara njikọta ọtụtụ cannabinoids na G protein na-anabata ihe GPR55 na ụbụrụ.
CBD ọ na-emewanye anandamide?
N'ihe banyere mmetụta nke cannabinoid na-adabere na CBD nke usoro mmụta egwu a kọwara n'elu, CBD na-abawanye ọkwa anandamide site na igbochi ntụgharị na mbibi nke FAAH.
Kedu nke cannabinoid eji mee ihe maka nchegbu?
Site na dose dị ala nke THC na oke ọgwụ nke CBD, profaịlụ Cannabinoid Harlequin dabara adaba maka ndị ọgụ na-atụ ụjọ bụ ndị na-adịghị eche echiche dị nro. Terpene ya kachasị ukwuu bụ myrcene, nke ekwenyere na ọ nwere mmetụta dị jụụ ma jiri ya mee ihe n'akụkọ ihe mere eme dị ka ihe enyemaka ụra.
CBD ọ na-enyere ụjọ aka?
A na-ejikarị CBD eme ihe banyere nchekasị, yana maka ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na nsogbu nke ehighị ụra nke ọma, ọmụmụ ihe na-egosi na CBD nwere ike inyere ma ụra ma ụra. CBD nwere ike ịnye nhọrọ maka ịgwọ ụdị mgbu na-adịghị ala ala.
Mmanya na-aba n'anya ọ na-enyere mmadụ aka inwe nchekasị?
Mmanya na-egbu egbu na-egbu mmụọ ma na-ada mbà n'obi nke na-emetụta usoro ụjọ nke etiti. Na mbụ, ị drinkingụ mmanya nwere ike ime ka ụjọ kwụsị ịtụ ụjọ. O nwere ike inyere gị aka ghara ịna-eme ihere, mee ka obi na-adị gị mma, meekwa ka obi ghara ịna-eru gị ala.
Kedu ka m ga - esi mata na m nwere ụjọ?
Iji chọpụta nhụjuanya nke ụjọ, dọkịta na-eme nyocha anụ ahụ, na-ajụ maka ihe mgbaàmà gị, ma na-atụ aro nyocha ọbara, nke na-enyere dọkịta aka ịchọpụta ma ọnọdụ ọzọ, dị ka hypothyroidism, nwere ike ịkpata mgbaàmà gị. Dọkịta ahụ nwekwara ike ịjụ maka ọgwụ ọ bụla ị na-a .ụ.
Kedu ọgwụ ndị a na-ekwesịghị ị withụ na CBD?
Antidepressants (dị ka fluoxetine, ma ọ bụ Prozac)
Ọgwụ nke nwere ike ibute iro ụra (antipsychotics, benzodiazepines)
Macrolide ọgwụ nje (erythromycin, clarithromycin)
Ọgwụ obi (ụfọdụ ihe mgbochi ọwa calcium)
Ndi CBD weputara dopamine?
Kedu dopamine dị ala dị ka?
Signsfọdụ ihe ịrịba ama na mgbaàmà nke ọnọdụ metụtara ụkọ dopamine gụnyere: mkpịsị akwara, akwara, ma ọ bụ ịma jijiji. mgbu na ihe mgbu. nkwesi ike na mọzụlụ.
Kafiin na-ebuli ọkwa dopamine?
A na-eji caffeine, ihe akparamàgwà mmadụ n'ụwa niile eme ihe iji kwalite ịmụrụ anya ma wulitekwa anya. Dị ka ọgwụ ndị ọzọ na-akwalite ụra (ihe na-akpali akpali na modafinil), caffeine na-eme ka dopamine (DA) na-egosi na ụbụrụ, nke ọ na-emekarị site na imegide adenosine A2A receptors (A2AR).
Kedu ụzọ kachasị mfe iji mụbaa dopamine?
Rie Ọtụtụ protein
Rie Abuba Udiri Ojuju
Na-eri ihe Probiotics
Rie agwa agwa
Emega ahụ mgbe mgbe
Nweta anwụ anwụ zuru oke
Ndi CBD welitere serotonin?
CBD anaghị eme ka ogo serotonin dị elu, mana ọ nwere ike imetụta etu ndị na-anabata ihe ụbụrụ nke ụbụrụ gị si azaghachi serotonin nke dị na sistemụ gị. Nnyocha anụmanụ nke 2014 chọpụtara na mmetụta CBD na ndị natara ụbụrụ a na ụbụrụ rụpụtara ma antidepressant na mgbochi nchegbu.
CBD enwere ike inyere ụbụrụ gị aka?
Ndị na-eme nchọpụta kwenyere na ikike CBD nwere ike ime ihe na sistemu endocannabinoid na sistemụ ụbụrụ ndị ọzọ nwere ike ịba uru maka ndị nwere ọrịa akwara. N'ezie, otu n'ime ihe ndị a na-amụkarị banyere CBD bụ n'ịgwọ ọrịa nhụjuanya dị ka epilepsy na ọtụtụ sclerosis.
Kedụ ka m ga - esi bulite ogo serotonin?
Kedu mmanụ CBD kachasị mma ịzụta maka ọnwụ ọnwụ?
Anandamide bụ onye ogbugbo egbugbere ọnụ nke na-arụ ọrụ dịka ụdọ dị egwu nke ndị natara CB1. Ndị a na-anabata ihe bụkwa ihe bụ isi na-akpata ọgwụ mgbochi nke Δ9-tetrahydrocannabinol, ihe ndị na-emetụta uche na Cannabis sativa.
Kedu ka ị si eme anandamide?
A na-eme ya site na N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine site n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ fatty acid amide hydrolase (FAAH) enzyme na-emebi ya nke ukwuu, nke na-agbanwe anandamide n'ime ethanolamine na arachidonic acid.
Ahụ mmadụ ọ na-emepụta CBD?
Otú ọ dị, ihe ị nwere ike ghara ịghọta bụ na nke a sitere n'eziokwu ahụ bụ na ahụ mmadụ na-emepụta nke ya cannabinoids dị egwu: ihe ndị sitere n'okike nke ogige dị na osisi cannabis, dịka THC (tetrahydrocannabinol) na CBD (cannabidiol)
Ọ bụ n'ezie CBD dị ukwuu?
Dịka ọmụmaatụ, enweghị ihe akaebe na CBD na-agwọ kansa. Enwere otutu ihe akaebe na CBD nwere ike imeziwanye nsogbu ihi ụra, mgbu fibromyalgia, mgbu ahụ metụtara ọtụtụ sclerosis, na nchekasị. Dr. Levy kwuru, sị: “Uru kachanụ m hụrụ dị ka dọkịta bụ ịgwọ nsogbu ụra, nchegbu na ihe mgbu.
Ngwaahịa CBD ọ dị mma?
Ojiji CBD nwekwara ụfọdụ ihe egwu. Ọ bụ ezie na a na-anabata ya nke ọma, CBD nwere ike ịkpata nsonaazụ, dịka ọnụ akọrọ, afọ ọsịsa, belata agụụ, ụra na ike ọgwụgwụ. CBD nwekwara ike iji ọgwụ ndị ọzọ ị na-ewere, dị ka ndị na-edozi ọbara.
Kedu ihe CBD na-eme ụbụrụ?
Àgwà ndị a jikọtara na ikike nke CBD ime ihe na ndị na-anabata ụbụrụ maka serotonin, neurotransmitter na-achịkwa ọnọdụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nchịkọta Iji CBD eme ihe iji belata nchekasị na nkụda mmụọ na ọmụmụ mmadụ na anụmanụ.
Kedu otu ngwa ngwa CBD si ahapụ usoro ahụ?
CBD na-anọkarị na sistemụ gị ruo ụbọchị 2 ruo 5, mana oke ahụ anaghị emetụta mmadụ niile. Maka ụfọdụ, CBD nwere ike ịnọ n'ime sistemụ ha ọtụtụ izu.
Ebee ka anandamide dị?
Anandamide na-arụpụta enzymatically na mpaghara ụbụrụ nke dị mkpa na ebe nchekwa, usoro echiche na njikwa mmegharị. Nnyocha na-egosi na anandamide na-ekere òkè na ịme na imebi njikọ dị mkpirikpi n'etiti mkpụrụ ndụ akwara, nke a metụtara mmụta na ncheta.
Anandamide bụ cannabinoid?
A na-akpọkwa N-arachidonoylethanolamine (AEA), anandamide na-akpakọrịta na ndị natara CB ahụ dịka cannabinoids dịka THC. Ọ bụ onye na-ahụ maka ntanetị na Cannabinoid-onye na-anabata ihe na-arụ ọrụ dị ka onye ozi mgbaàmà maka ndị nabatara CB dị na ahụ.
(1). Mallet PE, Beninger RJ (1996). "Onye agonist anonamide na - anabata ihe dị egwu na - emebi nchekwa na oke". Ahụhụ Behavioral. 7 (3): 276–284
(2) .Mechoulam R, Fride E (1995). "Roadzọ a na-eteghị aka na ụbụrụ ụbụrụ cannabinoid ligands, ndị anandamides". Na Pertwee RG (ed.). Cannabinoid ndị nabatara. Boston: Ọmụmụ Press. peeji nke 233–
(3) .Rapino, C.; Battista, N .; Bari, M .; Maccarrone, M. (2014). "Endocannabinoids dị ka ndị na-ahụ maka ọgwụ mmadụ." Mmeputakwa mmadu. 20 (4): 501–516.
(4).(2015). Cannabidiol (CBD) na analogs ya: nyocha nke mmetụta ha na mbufụt. Bioorganic & Ọgwụ Ọgwụ, 23 (7), 1377-1385.
(5) .Corroon, J., & Phillips, JA (2018). Ihe omumu nke ndi oru Cannabidiol. Cannabis na Cannabinoid nyocha, 3 (1), 152-161.
(6).Centerlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà Mmụta Ihe Ọmụma (2020). Nchịkọta PubChem Compound maka CID 644019, Cannabidiol. Weghachite October 27, 2020, site na .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… & C Silva, A . (2014). Antidepressant-dị ka nchegbu dị ka mmetụta nke cannabidiol: ihe na-emepụta ọgwụ nke Cannabis sativa. CNS & Ọrịa Neurological-Ebumnuche Ọgwụ (Ebumnuche Ọgwụ Ugbu A-CNS & Ọrịa Na-adịghị Arụ), 13 (6), 953-960.
(8) Ngọzi, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (2015). Cannabidiol dị ka ọgwụgwọ nwere ike ịkpata nsogbu erughị ala. Neurotherapeutics: akwụkwọ akụkọ nke American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 12(4), 825-836.
(10).Njem inyocha egt.
(11).Oleoylethanolamide (oea) - ihe anwansi anwansi nke ndu gi
(12).Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nicotinamide riboside chloride.
(13).Mmeju nke Magnesium l-threonate: uru, onunu ogwu, na ihe ndi ozo.
(14).Palmitoylethanolamide (agwa): uru, onunu ogwu, ojiji, mgbakwunye.
(15).Top 6 uru uru nke resveratrol Mmeju.
(16).Ihe 5 kacha elu na-ewere phosphatidylserine (ps).
(17).Top 5 uru nke ị pụ pyrroloquinoline quinone (pqq).
(18).Ihe kacha mma nootropic nke alpha gpc.
(19).Ngwunye kachasị mma nke ịka nká nke nicotinamide mononucleotide (nmn).
Anandamide dị na chọkọletị nwere ike itinye obi gị dum, mana ọ na-agbaji ngwa ngwa nke na ọ nweghị uru ọ bụla.
Dosedị anandamide dị oke arụ ọrụ CB1 iji belata omume egwu. Ma na akwa doses, anandamide malitekwara ịmalite ion channel TRPV1, nke na-egbochi mmetụta anxiolytic anandamide.
A na-akpọ nke a nzaghachi "biphasic" ma ọ bụ "U".
A na - emepụta Anandamide na ahụ anyị ebe THC na CBD na - emepụta osisi.
Anandamide na-arụ ọrụ ọnụ.
"pink obi ụtọ"
Nanị chọọ ikwu na isiokwu gị dịka ihe ijuanya. Ihe doro anya na post gị dị jụụ na enwere m ike iche na ị bụ ọkachamara n'okwu a. Ọfọn yana gị ikike ka m jide nke gị RSS na-anọ ruo ụbọchị na-eru nso post. Daalụ otu nde ma biko gaa n'ihu na-arụ ọrụ afọ ojuju.
CBD na - egbochi FHAA site na ịkwụsị Anandamide nke bụ ihe na - eme ka mbelata nchekasị dị ukwuu yana mbelata mbufụt ke idem.
Agụọla m ihe ole na ole na-egosi ọ blụ sitere n'aka Anandamide n'onwe ya, agụkwara m na mmadụ weere Theobroma Caocao wepụ ma nwee ọ blụ mmetụta. Enwere ike m ga-eleba anya na nke ahụ.
E nwere mmadụ abụọ dị iche iche na - anabata cannabinoid n’ahụ: CB1 na CB2. THC na-arụ ọrụ dị ka agonist na CB1 nke na-ebute disinhibition nke dopamine.
THC na CBD bụ phytocannabinoids, ebe anandamide bụ ihe dị egwu cannabinoid (ọ bụ ahụ anyị na-emepụta ya)
Mgbe THC na-ejikọta na CB1 ọ na - eme ka onye na - enweta G-Protein Coupled nke ga - emezi enzyme na / ma ọ bụ onye ozi nke abụọ. Ihe ndị GPCR a rụpụtara na-ebute ọtụtụ mmetụta, dị ka mgbochi ọgbụgbọ, ịdị jụụ, na mgbu mgbu.
O nwere ike inyere aka iche banyere ya dị ka ngwaọrụ Rube Goldberg - THC na-ejide onye nnabata CB1, nke na-eme ka GPCR rụọ ọrụ, nke na-eme ka ọtụtụ usoro ndị ọzọ rụọ ọrụ.
Anyị nwere ndị nabatara cannabinoid, ndị CB1 na CB2 natara ka ha bụrụ nke ziri ezi. Ndị na-anabata CB1 na arụ ọrụ, ma ọ bụ endocannabinoids na-eme ma ọ bụ nke sịntetik ma ọ bụ nke na-apụtakarị, na-egbochi ọtụtụ ndị ozi kemịkal. Otu n'ime ndị ahụ bụ neurotransmitter GABA, nke ya onwe ya na-egbochi ntọhapụ dopamine, na-enye gị akụkụ nke elu ị na-eche site na ahịhịa. E nwere ọtụtụ narị cannabinoids nwere ike ịgbalite ndị nnabata abụọ a, ma enwere ndị natara akwụkwọ ole na ole na-amụbeghị nke ọma na ọtụtụ cannabinoids nwekwara njikọta njikọta maka.